पोर्न स्टारले सेक्स सीनका लागी कण्डोम मागिन ! - Khabar Bhitrako Khabar
Home » Amazing News , Health and Sex , International News , Sports » पोर्न स्टारले सेक्स सीनका लागी कण्डोम मागिन !
पोर्न स्टारले सेक्स सीनका लागी कण्डोम मागिन !
Written By Khabar Mazza on Monday, October 22, 2012 | 9:04 AM
फेमस पोर्न स्टार अरोरा स्नोले एडल्ट मूभी इन्डस्ट्रीलाइ आश्चर्यमा पार्ने अभिव्यक्ति दिएकी छन् । उनले यस इन्डस्ट्रीजमा युवतीहरूको कुरा नसुनिने गरेको बताएकी छन् । यसका साथै स्नोले फिल्मको सुटिङ गर्दा पोर्न स्टार्सहरूले कन्डोम प्रयोग गर्ने सल्लाह पनि दिएकी छन् ।लस एन्जलस काउन्टीले पोर्न स्टार्सका लागी कण्डोम लगाउन अनिवार्य गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले यो नियमको पालना नभएको बताइएको छ ।३१ बर्षकी स्नोले भनिन, कण्डोमको प्रयोगले इन्डस्ट्रीले सुरक्षित सेक्सलाइ बढावा दिनका लागी मद्दत गर्न सक्दछ ।
उनका अनुसार कयौं पटक यस्तो सेक्स सीन आउँदछ, जहां कण्डोमले यस मजालाइ खल्लो बनाइदिन्छ । तर यो कदम फिल्मको शूटिङको अन्तमा पोर्न स्टारलाइ कुनैपनि रोगहरूबाट सुरक्षित रख्ने काममा मद्दत गर्द्छ ।साथै उनले अहिले सम्म आफुले गरेका ६०० भन्दा धेरै सेक्स सीन बिना कण्डोम दिएको कुराको खुलासा पनि गरेकी छन्, तर पर्सनल लाइफमा बिना कण्डोम सेक्स नगर्ने उनले बताइन् ।
स्नोका अनुसार पोर्न फिल्म इन्डस्ट्रीमा एडल्ट एक्टरहरूले एड्स तथा कयौं अन्य गम्भीर प्रकारका सेक्स सम्बन्धी रोगहरूसंग जुध्नु पर्दछ । यसो हुँदा हुँदै पनि फर्मले बिना कुनै टेस्ट पोर्न एक्टरहरू सेक्स सीन गर्नका लागी बाध्य हुने गर्दछन् । पोर्न स्टारहरूले यसका लागी कडा सुरक्षा कोडका साथ काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।यदि कसैले यस कुराको बारेमा विरोध गर्यो भने उक्त पोर्न एक्टर वा एक्ट्रेसलाइ यस फिल्मबाटनै निकालिन्छ । स्नोका अनुसार जसरी बाइक चलाउँदा हेलमेट लगाइन्छ, तर यो भद्दा हुन्छ, तर पनि लगाउनै पर्दछ । यसको फाइदा त एक्सिडेन्टका बेला मात्र थाहा हुन्छ ।त्यसैगरि पोर्न इन्डस्ट्रीमा कण्डोमले बाइक चलाउँदा लगाउने हेलमेट जस्तै काम गर्ने गर्दछ ।
Posted by Khabar Mazza at 9:04 AM
Labels: Amazing News, Health and Sex, International News, Sports